सन्दर्भः बाल दिवस, बाल अधिकार, हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी – Enayanepal.com
सन्दर्भः बाल दिवस, बाल अधिकार, हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी
‘अब त तरुनी भइ राम्रो इष्ट आएपछि विवाह ग रिदिनुपर्छ अझ खाना पकाउने ढङ छैन् यसले त दुःख पाउछेकी क्या हो ? कस्तो परिवारको नाक काट्ने पो हो की ढङ नभएकी भनेर जस्ता कुरा सुन्नु पथ्र्यौ । मेरा साथीहरु घाँस दाउरा चुल्हो चौको गर्थे, असल कामदारी छोरीको रुपमा कुर्थासरुवाल र फर्कमा सजिएर, तर म हाप पाइन्टमा हिड्ने गर्थे । केटाले जस्तो कपाल काटेर हिड्ने गर्थे । त्यो देखेर मेरो हजुरबुवाको मन कुडिएको हुन्थ्यौँ । तर मैले उहाँको रिसाईलाई व्यवास्था गर्थे ।
बिहान १० बजिसकेको थियो । अफिस जाने क्रममा आफन्तको घरमा एकछिन पसेको, दुईचार वटा कुरा गर्दागर्दै समय गएको पत्तै भएनछ । आज अफिसका लागि आधा घण्टा ढिला भइसकेको थियो । म भन्दा अगाडि एक जना युवक जो भर्खर मात्र बाल्यकालबाट युवक अवस्थामा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका जस्ता देखिन्थे, मेरो टेबलको अगाडिको कुर्चिमा हातमा चिठ्ठी बोकेर बसेका थिए ।
कुरा गर्दा थाहा भयो उनी बाल दिवस २०७३ को अवसरमा आयोजना गर्न थालेको कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा निमन्त्रणा चिठ्ठी लिएर आएका रहेछन् । चिठी दिएर फर्किदा पटक पटक उनी भन्दै थिए ‘मेडम कार्यक्रमा पिलिज आइदिनु होला ।’
त्यो अनुरोध म व्यक्तिलाई भन्दा पनि मेरो संस्थालाई थियो भन्ने आभास मलाई भयो । किन भने म बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत एक अग्रणी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी थिए । हुन त मेरो संस्थाको इतिहास हेर्दा नेपालमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अग्रज संस्था भएता पनि म भने बालअधिकारको क्षेत्रमा भर्खर मात्र बामे सरेको एक अभियान्ता हुँ ।
आज यस चिठीले जानिनजानि केही कुरा बाल अधिकारको विषयमा केही कुरा लेख्न मन लाग्यो । पछाडी फर्केर आफ्नो बाल्यकाल निहाल्दा, दुरभाग्य बाल्यकालका रमणीय र स्मरणिय भोगाई तथा अनुभव कमै थिए । किन की आफू जेठो सन्तान उसै माथि पनि छोरी आफु मुनिका अन्य भाइबहिनिको जन्म पछाडी त म ठूली भइसकेको थिए, परिवार र सामाजको लागि । खेल्न थाल्यो भने कसैले ‘ए नानि तँ त खेल्न सुहाउदैन्, आफु भन्दा साना भाइबहिनिसंग उनीहरुलाई खेल्न दिइ ।’
हास्न र रमाउन खोज्यो ‘नानि त्यसरी आवाज निकारेर दाँत देखाएर नहाँस । छोरी मान्छे भएर दाँत देखाएर हास्नु हुँदैन्, मान्छेको अगाडी नबस, छोरी मान्छे भएपछि आँ गरे अलङकार बुझ्नुपर्छ । ठूला मान्छेका कुरा सुन्नु हुँदैन्’ आदि इत्यादी ।
हास्न र रमाउन खोज्यो ‘नानि त्यसरी आवाज निकारेर दाँत देखाएर नहाँस । छोरी मान्छे भएर दाँत देखाएर हास्नु हुँदैन्, मान्छेको अगाडी नबस, छोरी मान्छे भएपछि आँ गरे अलङकार बुझ्नुपर्छ । ठूला मान्छेका कुरा सुन्नु हुँदैन्’ आदि इत्यादी । उही ठूली भइस भनेर खेलाउना खोस्ने आमाको काख र दुध छुटाउने परिवार समाज उही सानि भनेर ठूला मान्छेहरुले कुरा गरेको सुन्दा हप्काएर पठाउने केही वर्ष अन्तरालमा महिनावारी भए पछि ठुली तरुनी देख्थे ।
‘अब त तरुनी भइ राम्रो इष्ट आएपछि विवाह गरिदिनुपर्छ अझ खाना पकाउने ढङ छैन् यसले त दुःख पाउछेकी क्या हो ? कस्तो परिवारको नाक काट्ने पो हो की ढङ नभएकी भनेर जस्ता कुरा सुन्नु पथ्र्यौ । कता कता विद्रोह मौन रुपमा नै थाहा नपाएर नै जन्मिएको थियो होला साहेद । मौन रुपमै म आफ्नो अध्ययन अध्यापन र क्रियाकलापमा निरन्तर लागि रहन्थे । मेरा साथीहरु घाँस दाउरा चुल्हो चौको गर्थे, असल कामदारी छोरीको रुपमा कुर्थासरुवाल र फर्कमा सजिएर, तर म हाप पाइन्टमा हिड्ने गर्थे । केटाले जस्तो कपाल काटेर हिड्ने गर्थे । त्यो देखेर मेरो हजुरबुवाको मन कुडिएको हुन्थ्यौँ । तर मैले उहाँको रिसाईलाई व्यवास्था गर्थे ।
मेरो बाल्यकामा म आफ्नो अधिकारको बारेमा अज्ञान अनविज्ञ थिए । अहिलेको सन्दर्भमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको छ । नेपालको संविधान २०७३ ले बाल अधिकारलाई छुट्टै पूर्ण अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय स्तरिय पाठ्यक्रममा पनि बालअधिकारको विषयलाई समेटिएको पाइन्छ । अहिले बालअधिकारको क्षेत्रमा थुपै्र सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले ल्याएको अभियानकै फल स्वरुप संविधानमा बालअधिकारको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेको पाइन्छ ।
मेरो बाल्यकामा म आफ्नो अधिकारको बारेमा अज्ञान अनविज्ञ थिए । अहिलेको सन्दर्भमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको छ । नेपालको संविधान २०७३ ले बाल अधिकारलाई छुट्टै पूर्ण अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा, बाल मैत्री स्थानीय शासन जस्ता अवधारणले बालअधिकारको क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैलाई जिम्मेवारी र जबाफदेखि बनाउन मदत गरेको छ । बालबालिकाहरु पनि आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि आफ्नो समुदायमा विभिन्न अभियान जस्तैः बाल क्लबहरु गठन, क्लबहरुमा आवद्धता, बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताको खोजी, गाविस र नगरपालिकाद्धारा विनियोजित बजेटमा आफ्नो अधिकार मागलगायत अन्य क्रियाकलापमा पनि उनीहरुको सक्रिय सभागिता रहेको पाइन्छ ।
यी अभियानहरुले अहिलेका बालबालिकामा आफ्ना अधिकार कर्तव्य र दायित्वको बुझाई भएको पाईन्छ । अन्र्तािष्ट्रय कानुन बमोजिक १८ वर्षमुनिका लाई बालबालिका भनिएको छ । तर बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप नेपालमा १६ वर्ष उमेर नपुगेलाई बालबालिका मानिएको छ ।
बालअधिकार भनेको के हो ?
बाल अधिकार महासन्धी :
बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट बालबालिकाको अधिकारका निम्ति पारित राज्य राज्यहरुबिचको एक साझा सम्झौता पत्र हो । बाल अधिकार आर्दश र घोषणा पत्रमा मात्र सिमित नराखेर यसलाई बालविकासको व्यवहारिक स्वरुप दिन यस महासंधिको प्रतिवादन गरिएको हो । नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमदन गरिसकेको छ । आजको परिर्वतित समय संगसंगै बाल अधिकारलाई देशको मुल कानुन संविधानमै पनि समेटिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७३ भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको बारेमा उल्लेख गरिए अनुसार :
२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट स्वास्थ्य शिक्षा पालनपोषण उचित स्यारसुसार खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वागिण व्यक्तित्व विकासको हक हुने छ ।
सन्र्दभ सामग्रीः नेपालको संविधान २०७३
(लेखक बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) नेपाल सुर्खेतकी जिल्ला बाल संरक्षण अधिकृत हुन ।)